World Archives - Puntland Mirror Believable Media Website
Ilhaan Cumar aabaheed oo u geeriyooday coronavirus
June 16, 2020 Puntland Mirror 0
Washington-(Puntland Mirror) Aabaha Ilahaan Cumar oo ah gabar Soomaali ah oo katirsan Gongress-ka Mareykanka, ayaa xanuunka coronavirus u geeriyooday, sida ay Ilhaan ku sheegtay bayaan habeenimadii Isniinta. “Waxay ahayd murugo weyn iyo murugo in aan […]
May 9, 2020 Puntland Mirror 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Cudurka safmarka ah ee coronavirus ayaa ku dili kara 190,000 qaarada Afrika labo iyo tobanka bilood ee soo socda, sida lagu sheegay daraasad ay sameysay Haayada Caafimaadka Adduunka ee WHO. Daraasada WHO ayaa […]
March 9, 2020 Puntland Mirror 0
Khartoum-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha dalka Suudaan Abdalla Hamdok ayaa ka badbaaday isku day dil oo lala beegsaday kolonyo la socotay maanta oo Isniin ah gudaha caasimada Khartuum, sida ay ku warantay wakaalada wararka Reuters, oo soo […]
January 6, 2020 Puntland Mirror 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Saddex Mareykan ah oo mid yahay askari labo kalena tahay qandaraaslayaal ayaa lagu dilay weerarkii ka dhacay saldhiga Lamu ee dalka Kenya Axadii, sida ay sheegeen milatariga Mareykanka. Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) […]
January 5, 2020 Puntland Mirror 0
Nairobi-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa subaxnimadii Axada weerar ku qaaday saldhig kuyaala gobolka Lamu ee dalka Kenya kaasoo ay isticmaali jireen ciidamada Mareykanka iyo kuwa Kenya, sida ilo-wareedyo milatari ay u sheegeen wakaalada wararka Reuters. […]
December 4, 2019 Abdirahman Abdullahi Sheikh 0
Geneva-(Puntland Mirror) Isbedelka Cimilada ayaa khatarta ugu weyn ku ah caafimaadka dunida qarniga 21-aad, sida ay sheegtay haayada caafimaadka adduunka ee WHO. Warbixin dhowaan la soo saaray, waxay WHO ku sheegtey in xirfadleyda caafimaadku uu […]
Madaxweynaha Mareykanka oo cadeeyay in hoggaamiyihii ISIS lagu dilay duqeyn ka dhacday waqooyiga Suuriya
October 27, 2019 Puntland Mirror 0
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cadeeyay in hoggaamiyihii ISIS Abu Bakr al-Baghdadi lagu dilay duqeyn ay Mareykanku ka geysteen waqooyiga dalka Suuriya Sabtidii. “Xalay Mareykanka waxay cadaalada mariyeen hoggaamiyaha kowaad ee argagixisada adduunka.” […]
Sargaalkii hoggaaminayay inqilaabkii fashilmay ee Itoobiya oo la dilay
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Sargaalka looga shaki qabo in uu ka dambeeyay isku daygii inqilaabkii fashilmay ee gobolka Amxaara ee Itoobiya ayaa waxaa dilay ciidanka booliiska, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda. Janaraal Asaminew Tsige ayaa lagu […]
June 23, 2019 Puntland Mirror 0
Addis Ababa-(Puntland Mirror) Taliyihii ciidamada dalka Itoobiya Janaraal Seare Mekonnen ayaa ilaaladiisu toogasho ku dishay gudaha caasimada Addis Ababa, sida lagu sheegay bayaan kasoo baxay xafiiska raysulwasaaraha Itoobiya. Isku day afgembi oo ka dhacay gobolka Amxaara […]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Ciidamada Kenya ee KDF ee ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa 13 dhalinyaro ah oo u dhashay Kenya ka badbaadiyay qorshe ay Al-Shabaab rabtay in ay ku qorato, sida ay sheegeen saraakiisha KDF. 13-ka [...]